प्रधानमन्त्री ओलीले आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, यि हुन् सभ्भावित मन्त्री – Dainik Samchar
प्रधानमन्त्री ओलीले आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, यि हुन् सभ्भावित मन्त्री
June 6, 2021 334
काठमाडौ । शुक्रवार मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतवार पनि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । पूर्व माओवादी सांसद कारवाहीमा परेका कारण खाली भएको मध्य ७ मन्त्रालय अझै पनि ओलीले आफ्नै मातहतमा राखेका छन् । ओलीले मन्त्रीपरिषद्मा अब नयाँ अनुहार ल्याउने तयारी गरेको बुझिएको छ । जसमा आफ्नो निकै निकट रहेका र कोही माओवादी छोडेर आएकाहरुलाई समेट्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
ओलीका सबैभन्दा नजिकको मानिएका महेश बस्नेत पनि मन्त्री हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेयता प्रधानमन्त्री ओली एक्लैको जिम्मामा ७ मन्त्रालय छन्। ति मध्य गृह लगायत केही महत्वपुर्ण मन्त्रालय पनि छन् ।
तिनमा मन्त्री नियुक्ति गर्ने तयारी प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका हुन्। बालुवाटार स्रोतका अनुसार आज उनले एमाले र माओवादी केन्द्रबाट आफ्नो पार्टीमा आएका नेताहरूलाई मन्त्री बनाउने सम्भावना छ।
स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रलले कारबाही गरेका कारण प्रदेश सांसद पद गुमेकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रदेश नम्बर २ की ज्वालाकुमारी साह मन्त्री हुने लगभग निश्चित भएको स्रोतको दाबी छ। यस्तै एमालेबाट महेश बस्नेत र नारदमुनि राना थारु मन्त्री हुने सूचीको अग्रपंक्तिमा छन्।
Prevजब वडाध्यक्षलाई आफैँ मरेको खबर फोनमा आयो … यसकारण सबैले उनीप्रति श्रद्धाञ्जली दिइरहेका छन् !
Nextअति नै भएपछि झोक्किए प्रधानन्यायाधीश : प्रधानमन्त्री पक्षका वकिललाई दिए मानहानीको मुद्दा चलाउने चेतावनी
खुशिको खबर ! नेपाल सरकारले घरमा छोरी हुने परिवारलाई निशुल्क दिने भयो यस्तो सुविधा ! पूरा पढ्नु होस
१० जना हिरोहरुसँग सुत्दै हिड्ने केटी हो रेखा थापा : शिल्पा (5204)